नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (आइतवार, २७ माघ २०७५)
बजार सारांश ( २४ माघ, २०७५)
गत साता नेप्से परिसूचक २२ दशमलव शून्य ६ अंक (१.९० प्रतिशत) घटेर ११३९ दशमलव ५७ मा बन्द भएको छ । अहिले नेप्से परिसूचक ५० दिनको मुभिङ एभरेज र २०० दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा तल चलिरहेको छ । पछिल्लो हप्ता दैनिक औसत कारोबार रकम रू. २६ दशमलव ७६ करोड रहेकोमा गत साता कारोबार रकम बढेर रू. ३० दशमलव शून्य ८ करोड पुगेको छ । गत साता नेप्से परिसूचकले ११०९ देखि १२३२ को स्विङको ६१ दशमलव ८ प्रतिशत फिबोनाची रिटे«समेन्टको टेवा तोडेर तल आएको छ । गत साताको सोमवार नेप्से परिसूचकले बियरिश क्लोजिङ मारुबोजु मैनबत्ती बनाएको थियो, जसले गर्दा साताको बाँकी दिनमा नेप्सेले बियरिश मोमेन्टम देखाएको छ ।
2019-02-10 - 112 view(s) - abhiyan